Igwefoto Kaadị ebe nchekwa Iweghachite - Naghachi ehichapụ foto / foto
2 ụzọ naghachi faịlụ site na Igwefoto Kaadị ebe nchekwa na dị nnọọ nkeji ole na ole
Taa ese foto na-tinyere na kọmputa na ndị na-eji ha weghara ha pụrụ iche ma dị ebube oge. Ọtụtụ n'ime ndị igwefoto nwe-eme adịghị ndabere foto ndị a si otú n'ihe ize ndụ adịkwa ha dị oké ọnụ ahịa photos. Onye ọrụ mgbe masịrị, mgbe photos efu si kaadị ebe nchekwa. Luckily, foto gị nwere ike ka na-natara ma ọ bụrụ na nri usoro na-eji.
Ọnọdụ nke pụrụ iduga ida nke data na igwefoto na kaadị ebe nchekwa
Ị nwere ike ida data ma ọ bụ foto na igwefoto gị na kaadị ebe nchekwa ruru ka ndị na-esonụ ọnọdụ:
Rụrụ arụ na kaadị ebe nchekwa ruru mberede mwepụ si igwefoto ma ọ bụ usoro mgbe agụ ma ọ bụ dee usoro bụ na-aga
Elezighị formatting nke kaadị na-enweghị kwesịrị ekwesị ndabere na Windows usoro.
Obi malware mwakpo igwefoto dị ka a n'ihi nke ejikọta ya na nje usoro
Interruptions si ma ike anya ma ọ bụ usoro mechie mgbe na-akpụ akpụ data site na kaadị ebe nchekwa na PC ma ọ bụ ndị ọzọ na nchekwa ngwaọrụ.
Rụrụ arụ faịlụ usoro ke kaadị ebe nchekwa, na mberede nhichapụ nke dị mkpa data, ị na-ahọrọ hichapụ ihe niile nhọrọ ga-maa tufuo data na kaadị ebe nchekwa.
Ndị kasị mma data mgbake software maka igwefoto na kaadị ebe nchekwa
Wondershare Photo Recovery (Ma ọ bụ Photo Recovery for Mac) na professionally e software ga-enyere gị na-azụ gị furu efu photos. Ị nwekwara ike iji ya na-agbake audios, videos, Archives na ozi ịntanetị site na dijitalụ ngwaọrụ dị ka USB mbanye, ike mbanye, na igwefoto dijitalụ na ndị ọzọ na mbughari ngwaọrụ.
Ị na-adịghị achọ ihe ọ bụla nkà-eji nke a software ebe ọ nwere nnọọ atọ mfe nzọụkwụ. Nke a software dị mfe iji, mgbanwe na data mgbake bụ ngwa ngwa.
N'ihi na ala na irè data mgbake software, na-agbalị Wondershare Photo Recovery. Unu ga-esi na gị onwe gị version ugbu a na-eji ya na-agbake gị efu photos.
Olee otú iji weghachite foto site na a emerụ kaadị ebe nchekwa na iji Wondershare Photo Recovery
Wondershare Photo Recovery Utilizes atọ mfe nzọụkwụ naghachi furu efu data.
Nzọụkwụ 1 Jikọọ kaadị
Akpa jikọọ emerụ ebe nchekwa nwere ike site na USB mbanye ma ọ bụ kaadị agụ na kọmputa. Gbaa mbọ hụ na na kaadị n'ụzọ kwesịrị ekwesị ejikọrọ na-ekwe ka ala nke mgbake. Ozugbo PC na-achọpụta rụọ kaadị, ị ga-ahụ ndepụta nke partitions si mbanye na ndị ọzọ na nchekwa media. Wee pịa Malite button aka scanning usoro na-agba ọsọ.
E nwere ihe anọ mgbake ụdịdị na ụdị mode họrọ ga kpebiere ego nke oge e site mgbake usoro.
Nzọụkwụ 2 Họrọ otu ọnọdụ ma nwee Doppler
Ebe a ị na-chọrọ họrọ gara aga ọnọdụ gị photos. Họrọ kaadị ebe nchekwa ebe unu furu efu gị photos furu site emerụ kaadị ebe nchekwa. Pịa na iṅomi igbe aka scanning ịnọgide.
Cheta, ị nwere ike ị kwụsịtụ ma ọ bụ kwụsị scanning usoro ọ bụ ezie na ọ bụ ihe amamihe na-ekwe ka scanning nke data iji wuchaa ka mma mgbake usoro. E nwere File nyo nhọrọ-enyere gị aka ịchọ ụfọdụ faịlụ na ngwa ngwa.
Nzọụkwụ 3 Naghachi gị furu efu photos
Ịgụ isiokwu ga-arụpụta ga-egosipụta na gị na ihuenyo mgbe scanning zuru ezu. Ihuchalu foto site na Doppler results na họrọ foto na ị chọrọ-natara. Iji mee ka njirimara, Doppler results na-egosipụta n'ime ha na faịlụ formats. The natara faịlụ nwere ike categorized na okwu nke size, aha, ụbọchị gbanwetụrụ ma ọ bụ kere. Ọzọkwa, ị nwere ike ịzọpụta Doppler nsonaazụ mgbe foto mgbake na-enweghị mkpa maka rescanning.
N'ikpeazụ, pịa Naghachi button aka foto mgbake usoro na-amalite.
N'ihi na nchekwa nke gị natara photos na ndị ọzọ na faịlụ, Adịghị azọpụta ha na rụrụ arụ kaadị ebe nchekwa. Ị nwere ike ịzọpụta ha na ndị ọzọ mpụga ngwaọrụ ma ọ bụ kọmputa.
Olee otú naghachi foto site na igwefoto kaadị nchekwa na Wondershare Data Recovery
Naghachi gị furu efu photos, gị mkpa a dị ike igwefoto kaadị ebe nchekwa mgbake ngwá ọrụ. E nweghị ọzọ dị ike na oru oma ngwá ọrụ karịa Wondershare Data Recovery (ma ọ bụ Data Recovery for Mac). Download Wondershare Data Recovery software maka Mac nhọrọ ma wụnye ya iji weghachite gị kwesịrị ncheta photos.
Nzọụkwụ n'okpuru ga-eduzi gị na-agbake foto gị site na Igwefoto kaadị ebe nchekwa.
Nzọụkwụ 1 Jikọọ igwefoto na kaadị ebe nchekwa
Mgbe ọma wụnye usoro ihe omume, na-agba ọsọ software. A windows usoro ihe omume nke ngwá ọrụ a ga-egosipụta na gị na ihuenyo. Jikọọ gị igwefoto dijitalụ site na eriri USB ma ọ bụ kaadị agụ Mac. Jide n'aka na kaadị na-ọma ejikọrọ dị otú ahụ na ọ na-ghọtara dị ka akụkụ nke Mac
Ebe a, anọ mgbake ụdịdị ga-egosipụta na-amalite windows nke mgbake software. Họrọ Lost Data Recovery na gaba họrọ gị igwefoto na kaadị ebe nchekwa dị ka ọnọdụ maka agbake furu efu photos. Mgbe ahụ-akpali n'elu akụkụ nke windows, see na iṅomi igbe na-amalite mgbake nke foto gị.
Nzọụkwụ 3 Preview na-agbake gị furu efu photos
Mgbe scanning zuru ezu, a ọnụ ọgụgụ nke faịlụ ga-egosipụta na gị na ihuenyo. Na-aga site photos egosipụta site scanning N'ihi na họrọ ndị na-ịchọrọ ị weghachi. Gaba kụrụ na Naghachi button na họrọ na ọnọdụ gị Mac ịzọpụta gị natara photos.
Mgbe gị foto na-ka na-efu, na-aga azụ nzọụkwụ 2 na họrọ Kwado Deep iṅomi. Wondershare Data Recovery Bụ irè mgbake software na ị gaghị na-atụ uche na-azụ foto gị.
Nke faịlụ na ụdị na-eme Wondershare Data Recovery support?
Wondershare Data Recovery Software akwado n'elu 550 faịlụ na ụdị. Nkịtị ndị na-agụnye
Ozi ma ọ bụ ozi ịntanetị
Top 10 mma igwefoto ebe nchekwa kaadị
Ị na-aga maka a ibugo onu ma ọ bụ ezumike na gị mkpa ndị kasị mma na kaadị ebe nchekwa gị igwefoto ịzọpụta gị niile wee weghara ịtụnanya oge. A bụ ndepụta nke top 10 mma igwefoto ebe nchekwa kaadị n'ime ha na ma ndị na-agụ na dee ọsọ.
4. Sandisk Oke pro
6. PNY J.Randall Performance
8. adịchaghị verbatim
> Resource> Igwefoto> Olee naghachi Pictures si Digital Igwefoto Kaadị ebe nchekwa